Semalt: Indlela yokuSonga idatha kwi-Craigslist
. Nangona kunjalo, i-data scrape efanelekileyo ingenza le nkqubo ingancinci. Ngoxa unokukrazula kalula idatha kwi-API kwezinye iisayithi, i-API ye-Craigslist ayikuvumeli ukuba udonse idatha kuphela. Endaweni yoko, ivumela abasebenzisi ukuba bathumele idatha, nangona ubuninzi. Nangona kunjalo, usenokwenza i-craigslist xa ukhetha i-right tool yokukhangela .
Ukukhetha i-Craigslist Scraper ye
Injongo yakho kukuba ukhethe i-scraper eyokukunceda ukuba uvuno lonke ulwazi olufunekayo - conception et r?alisation de gestion des ressources humaines. Unako ukukhetha i-scraper yedatha okanye inkokhelo.
Iinkcukacha zeeFreeper Scraper
I-scraping isisombululo sokuqhawula yonke injongo esinceda ukuba uqheke. Inika ezinye zeenkonzo zokucoca ezikhululekileyo mahhala, kungekhona nje kwi-Craigslist kodwa kwiindawo ezahlukeneyo. Ingaba ufuna ukwenza imisebenzi eyisisiseko okanye eyinkimbinkimbi, kufuneka nje usebenzise iincwadi zecandelo le-Scrapy ukuze uyenze.
Iinkcukacha ezihlawulwayo (Scraper Data)
I-Visual Web Ripper iyisitye esinamandla sokuqhawula okukukunceda ukuba uqhube i-Craigslist. Iimpawu eziqingqiweyo ze-graphical and tutorials zenza kube lula kakhulu ukusebenzisa. Iqiniso lokuba i-Visual Web Ripper ibaluleke kakhulu kumngeni kwabanye abasebenzisi. Nangona kunjalo, unikezwa ngokuphuculwa kokuphila kwamahhala.
Yiyiphi i-Scraper eyona nto ilungileyo?
Ukuba ukhangele iinkonzo zokukhwa kwekhwalithi, awuyi kuhamba kakubi ngokukhetha enye yezinto ezilapha ngasentla.
Kuthiwani malunga needrafta zedatha eziye zenzelwe i-Craigslist? Ngelixa lizwakala lihle, ama-scrapers adalwe ku-Craigslist aphelelwanga kuba awukwazi ukuyisebenzisa kwenye indawo.
I-craigslist inesibindi ngokufumana nokuyeka ama-scrapers. Ukuba uphawula, idilesi yakho ye-IP ivaliwe, unokufihla ubuni bakho ngokusebenzisa idilesi ye-IP proxy. Ummeli ufihla ubungqina bakho kunye nezenzo ukuze ukwazi ukurhweba idatha ngaphandle kokuphawula.
Indlela yokulungisa iiProxies zakho?
Ukulungiswa kweproxy kuxhomekeke kuhlobo lokutshiza ofuna ukuyisebenzisa. Ukuqwalasela i-Visual Web Ripper, khangela i-"Proxies" ithebhu uze ufake ulwazi olufunekayo.
Ukumisela iShedyuli, kufuneka ufunde amaxwebhu malunga nendlela yokumisela ummeleli wakho. Oku kuyinto evamile xa usebenzisa i-free scraper yedatha.
Thatha ixesha lakho kwaye uqinisekise ukuba ubeka yonke into phambi kokuba usebenzise i sixhobo sakho. Emva kokuba izicwangciso zethuluzi zihlolwe, qalisa ukukhahlela kwaye ufumane yonke idatha oyifunayo kwi-Craigslist.
I-Craigslist Isicelo soLwazi
Idatha ye-Craigslist ingasetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, ukuba ufuna ukuthenga imoto esetyenziswayo, unokwenza yonke idatha kwiimoto ezisetyenzisiweyo ukuthelekisa amanani abo kwaye ngoko. Ungasebenzisa kwakhona idatha yeCraigslist ukudala izikhokelo, iintlola ze-spy kunye nokunye okuninzi. Ezi ziindlela ezimbalwa zokusebenzisa idatha echanekileyo.
Ngoku uyazi indlela yokwahlula idatha esuka kwi-Craigslist. Fumana ithuluzi elihle lokutshiza, kwaye uzakufumana yonke into oyifunayo kwi-Craigslist!